Hydraulic Stacker, Carton Stacker, otomatiki Stacker - HengChuangLi
Corrugated yekugadzira mutsara
Single mativi chemarata bhodhi
Matatu ply corrugated board
Matanho mashanu enguruve dzengura
Kudhinda Mashini Mashini
Otomatiki pizza bhokisi rekudhinda muchina chemarata ...
280 single muchina
Kaviri glue muchina
NC-30D NC cutter helical mapanga
NCBD dzakaonda chipande slitter scorer, Zero Pressure L ...
Kaseti Yakatarisana Yakatarisana SF-360E (320E)
SF-320C isina zvigunwe mhando imwechete facer
RG-1-900 yepamusoro, yepakati, pepa preheater RG-3-900 ...
ZJ-V5B hydraulic shaftless mill roll yakamira
Dongguang HCL Carton Machinery Kugadzira Co, Ltd. yakavambwa muna 2004, uye inovhara nzvimbo inopfuura ma5 maeka, inogadzira fekitori ndeye 3000 mativi emamita. Inowanikwa kumaodzanyemba kweguta guru Beijing uye kuchamhembe kweJinan, iyo yekufambisa mvura uye yepasi iri nyore kwazvo. Chinhu chikuru-pamwero nyanzvi mugadziri kuti atorwa michini uye kudhinda michini. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira zvakakwirira-kumhanya mabhodhi ekugadzirwa kwemabhodhi (matatu, mashanu, manomwe), mitsara-yemativi yemabhodhi ekugadzira mitsara, michina yekudhinda, nezvimwe. Kambani yedu ine michina yakakwana, hunyanzvi hwehunyanzvi uye ruzivo rwakawanda rwekugadzira, simba rakasimba rehunyanzvi .
Sumo ipfupi, musimboti wekushanda uye ...
Brief sumo Maererano chemarata bhodhi kugadzirwa maitiro, iyo chemarata bhodhi yekugadzira tambo inoumbwa neyakaenzana yakazvimiririra emvura magumo ekushandisa uye cadre chikamu. The isu ...
Ndeapi mamiriro ekuvandudza ecorruga ...
Tile mutsara ipfupi kune chemarata bhodhi yekugadzira mutsetse, ndiyo webhu yepasi pepa mushure mekutsikirira mabhatani, kunama, kusunga, pepa kudzvanya mutsetse, kuyambuka kucheka mubato retsananguro, mushure mekodhi kodhi uye mamwe maitiro emutsara wegungano. Zvakadai sedzimwe-mativi chemarata mapepa anogadzira ...
Muchina unogadziridza unoshandiswa kugadzirisa kutsauka kwekuisa chisimbiso kwemoto uye kucheka bhegi kugadzira muchina uye kudhinda zvinhu zvekurembera. Muchina unogadzirisa wakavakirwa pane yemagetsi kutamisa chiratidzo chiratidzo kune inogadzirisa mutongi, uyezve iyo controller kuburitsa inogadzirisa chiratidzo kune iyo rectifyi ...
Chengnan Industrial Park, Dongguang County, Hebei Dunhu